မဲပေးခြင်း နှင့် ပတ်ဘလစ်စတီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Drama, Essays.. » မဲပေးခြင်း နှင့် ပတ်ဘလစ်စတီ	10
မဲပေးခြင်း နှင့် ပတ်ဘလစ်စတီ
Posted by ကျော်လွင်ဖြိုး on Oct 22, 2015 in Drama, Essays.., Think Different | 10 comments
၂၀၁၅ ကြိုတင် မဲ ပေး ဖို့ အတွက် စလုံး က လူတွေ
တန်း အရှည်ကြီး စီကြရတာ
မဲစာရင်း ထဲ မပါ လို့ ငိုကြယိုကြတာ
နေပူထဲ အကြာကြီး နေရလို့ မူးမေ့လဲကုန်ကြတာ ကို
အိုဗာတင်း တွေ ပါ အလကား သက်သက် အပို လုပ်တာ ပါ ဆိုပြီး
ပြောတဲ့ လူတွေ တွေ့လာတော့
ဆရာ မောင်မိုးသူ ဘာသာပြန် တဲ့ အိတ်ဇိုးဒပ် ဝတ္ထု ကို သွား သတိရတယ်။
ဂျူး တွေ အစ္စရေး နိုင်ငံ ထူထောင်တဲ့ အကြောင်း
အဲ့ဒီ ဝတ္ထု ရဲ့ အစ မှာ အဓိက ဇာတ်ဆောင် အယ်ရီ ဘင်ကင်နင် က
ဆိုက်ပရပ်စ် မှာ ရှိတဲ့ ဂျူး ထိန်းသိမ်းရေး စခန်း ကနေ ကလေး ၃၀၀ (မွေးကင်းစ သေးသေးလေးတွေ မဟုတ်ဘူးနော်) လောက် ကို ခိုးပြီးတော့
သင်္ဘောတစ်စီး ပေါ် တက်ပြီး သူတို့ကို အစ္စရေး ကို သွားခွင့်ပေးပါ
မပေးရင် ဒီ သင်္ဘောပေါ်မှာပဲ ကလေးတွေ နဲ့ နေနေမယ်။ ဗြိတိသျှ တပ်တွေ တိုက်ခိုက် ဖို့ ကြိုးစားရင် ဒီကလေးတွေနဲ့ အတူ သင်္ဘော ကို ဗုံးခွဲ ပစ်မယ် ဆိုပြီး ရာဇသံ ပေးတယ်။
အဲ့ဒီ မှာ ဗြိတိသျှ အစိုးရ က ဇဝေဇဝါ ဖြစ်နေတုန်း နောက်နေ့ကျတော့ ထပ်ပြီး သတင်း ထုတ်ပြန်တယ်။
အစ္စရေး ကို သွားခွင့် မရ မချင်း သင်္ဘော ပေါ်က လူတွေ ကလေးတွေ အပါအဝင် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒ ပြ မယ် ဆိုပြီးတော့။
အဲလို အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြတော့ ကလေးတွေ ကို ခုတုံး လုပ်တယ် ကလေးတွေ ကို နှိပ်စက်ရာ ကြတယ် (အိုဗာတင်း တယ်ပေါ့လေ) ဆိုပြီး ဇာတ်ဆောင် မင်းသမီး သူနာပြု ဆရာမ (ကေသီ ထင်ပါရဲ့ နာမည် က) က အယ်ရီ ကို စွပ်စွဲတယ်။
ဒါ publicity အတွက် လုပ်နေတာ။
ဂျူးတွေ ခုလို အဖိနှိပ်ခံ အကျဉ်းချ ခံ နေရတာ ကို ကမ္ဘာက သိအောင် လုပ်နေတာ။
သူတို့ မှာ လူအင်အားလဲ မရှိ လက်နက်လဲ မရှိ မဟာမိတ် လဲ မရှိတော့လို့ ရှိတဲ့ လူ နဲ့ ဖြစ်သလို တိုက်ပွဲ ဝင်နေရတာတဲ့။
မဲစာရင်း တွေ မှားတယ်
မဲစာရွက်တွေ အပြည့်အစုံ မရှိဘူး။
မဲပေးဖို့ အစီအစဉ် က စနစ်တကျ မရှိဘူး။
တာဝန်ယူတဲ့ လူ တာဝန်ခံတဲ့ လူ တစ်ယောက် မှ မရှိဘူး။
အဲ့ဒါတွေကို ကျန်တာ ဘာမှ လုပ်လို့ မရတော့ တန်း အရှည်ကြီး စီပလိုက်တယ်း)
မြန်မာတွေ မဲပေးဖို့ အတွက် အဲ့လောက် ဒုက္ခ ခံ ပြီး လုပ်နေကြရတယ် ဆိုတာ ကမ္ဘာက မဟုတ်တောင် အာဆီယံ ထဲ တော့ နာမည်ကြီးသွားတာပေါ့။
အဲ့ဒီမှာမှ ဒီလူတွေ ဘာ့ကြောင့် အဲ့လောက် မဲပေးချင်ကြရတာလဲ။
ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် တန်းတွေ စီ ပြီး ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် မဲပေးကြရတာလဲ။
ဘယ်သူ့ ကို မဲပေးချင်ကြတာလဲ။
ဆိုပြီး မေးခွန်းလေးတွေ ထုတ်လာကြရင် ကို မဆိုးပါဘူးလေ။း)
has written 16 post in this Website..
၈၈ခုနှစ်မှာ မွေးသည်။ အပြောအဆို အနေအထိုင် ဂွကျသည်။ လွန်စွာ အပျင်းကြီးသည်။
လူများနဲ့ ပြောင်းပြန် တွေးလွန်းသောကြောင့် လမ်းထွက်လျှင် သံခမောက် ဆောင်း ထွက်ရသည်။
View all posts by ကျော်လွင်ဖြိုး →	Blog
ဇီဇီခင်ဇော် says: မချောရူပါ ရေးထားတာလေး လာထားလိုက်အူးမယ်။
နိုင်ငံခြားထွက်နေတဲ့သူတွေ က ကဲ တယ်တဲ့လား။ ဒီမှာ အဆင်မပြေလို့ သိပ်ပြန်ချင်လွန်းလို့ အတင်းမဲဆွယ်နေသတဲ့လား။
ပြန်ချင်တာ မိသားစု နဲ့ မြန်မာပြည်ကို ချစ်လို့ ကလွဲလို့ အဆင်မပြေတာ တစေ့ တောင် မရှိပါဘူးကွယ်။
အလုပ်ခွင် ဆက်ဆံရေး က စပြောမယ်။
အင်မတန် လူလို နေရတာကိုး။ အမှားလုပ်မိရင်တောင် အစ ဆို ဒီလိုပဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ ငါ့တုန်းကလည်း ဒီလိုပဲ။ နင့်ထက်တောင် ဆိုးသေး။ ဘာမှ မဖြစ်နဲ့ ဆိုပြီး အထက် အဆင့်ဆင့်တာဝန်ယူသွားပါတယ်။ ကိုယ် နဲ့ ရာထူးတူတွေကလည်း စ စ နောက်နောက် နဲ့ အမှားလုပ်မိတာတောင် ဟာသလို ဖြစ်သွားအောင် ပေါ့ပါးစေပါတယ်။ (ကိုယ်က မြန်မာပြည်က လာသူမို့ ရုံးခန်းထဲ ခေါ်ဆူတော့မှာလားလို့ ကြောက်နေတာပေါ့။ ဟဲ ဟဲ မြန်မာပြည်မှာ ဘာရာထူးမို့ ရုံးခန်းထဲ ခေါ် အဆူခံရ သလဲ မေးပါဦးလား။ ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ် က ကထိကပါရှင့်။ ဘာလုပ်မိလို့လဲလို့ဆက်မေးပါဦးလား။ ယောက်ျားယူခါနီး အဆောင်မှာ မနေပဲ ကိုယ့်အိမ် နဲ့ကိုယ် နေဖို့ ပြင်ဆင်လို့ အဆောင်စည်းကမ်း မလိုက်နာမှု နဲ့ပါ။ အသက်က ၃၀ ပါ။ အဲ living together လို့ တော့ မထင်နဲ့နော်။ ယူမဲ့ ယောက်ျားက စလုံးမှာ။ ဘာမှ မပြောပဲ အဆောင်က ထွက်သွားလို့ လို့ လည်း မထင်နဲ့ ဦးနော်။ အကျိုးအကြောင်း ပြောပြီး အဆောင်မှာ မနေတော့ကြောင်း ပြောပြီးသား။ ထားပါတော့လေ။ အဲ့လို ဘဝ က လာသူ ဆိုတော့ အဆူခံရမှာ ကြောက်တာပေါ့။) လစာ
ဒီရောက်တော့ အလုပ်လျှောက်ရင် ခန့်မှန်းလစာ ဖြည့်ရတယ်။ လက်တောင်တုန်တယ်။ တလခ စာ ဖြည့်တာ မြန်မာပြည် က ကထိက လစာ ရဲ့ ၂၅ ဆ လောက် ဖြစ်နေလို့။ အောင်မယ် ဒါဘာဟုတ်သေးလဲ ဒီမှာ ၁၃လစာ ဆိုပြီး တစ်နှစ်ပြည့်ရင် တလစာ ပိုပေးသေးတာ။ တစ်နှစ်တခါ 4% က နေ 6% လောက်ထိ လစာက တိုးတိုးလာသေးတာ။ အလုပ်ပြောင်းလိုက်ရင် လစာက 15% လောက် တက်လာသေးတာ။ ဒါတောင် ဘောနပ်စ် ထည့် မပြောသေးဘူး။ ထည့်ပြောလိုက်ရင် ထိုင်ငိုကုန်မှာ စိုးလို့။
တစ်နှစ်ကို ခွင့် က ၁၈ ရက်ရတယ်။ စနေ တနဂနွေ public holidays မပါဘူး။ စနေ တနဂနွေ public holidays တွေပါပေါင်းပြီး ခွင့်ယူလိုက်ရင် တလလောက်တော့ မြန်မာပြည်ပြန်နားလို့ ရတယ်။ လစာ အပြည့်နဲ့နော်။ ဆေးခွင့်က ၂၁ ရက်ရတယ်။ ဆေးခန်းသွားရင် တပြားမှ ပေးစရာ မလိုဘူး။ ကျန်းမာရေး အာမခံ ကို အလုပ်က ဝယ်ပေးထားသေးတယ်။ အလုပ်ခွင်စည်းကမ်း
အလုပ်တခုနဲ့ တခုမတူဘူး။ IT သမားတွေဟာ ရုံးချိန် လွတ်လပ်မှု ရှိတယ်လို့ ပြောလို့ ရတယ်။ ရုံးနောက်ကျလို့ ရတယ်။ ကိုယ့်အသိနဲ့ကိုယ် နောက်ကျပြီး ပြန်ပေါ့။ အလာနောက်ကျ အပြန်စော လုပ်မိတယ်။ နောက်နေ့ အချိန် ပိုယူပေးလိုက်ပေါ့။ ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာ deadline ဟေ့ ဆိုရင်တော့ မပြီးရင် ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူပေါ့။ မပြီးမှ စိုးလို့ စနေလာလုပ်သူလည်း ရှိတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စီမံခန့်ခွဲလို့ ရပါတယ်။ rush အရမ်း ဖြစ်လို့ ကိုယ်ပိုင် အချိန်ထဲက ပေးပြီး လုပ်လိုက်ရရင် time off ပြန်ယူလို့ ရပါတယ်။ အချိန်အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တွေ ကတော့ နောက်ကျလို့ မရပါဘူး။ အချိန်ပိုလုပ်ရရင် လုပ်ရသလို အချိန်ပိုကြေးပေးပါတယ်။ အဝတ်အစား နဲ့ လုပ်ငန်းခွင်
အဝတ်အစားကို ကန့်သတ်မထားပါဘူး။ လုံခြုံ smart ကျဖို့ပါပဲ။ company က တော့ လှပ smart ကျစေချင်ပါတယ်။ company reputation အတွက်ပါ။ ဆံပင်ပုံကြိုက်သလို ထားလို့ ရပါတယ်။ ဆေးလည်းဆိုးလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူမှ အလွန်အကျွံ သရုပ်ပျက် အရောင်ဆိုးတာ ဝတ်စားတာ မတွေ့ရပါဘူး။ company နဲ့ မိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ dignity ကို တန်ဖိုးထားပါတယ်။ (ဇွတ်စည်းကမ်းမထုတ်သော်လည်း မိမိကိုယ်ကို လေးစားသောအားဖြင့် စည်းကမ်း ရှိပြီးဖြစ်စေပါတယ်။)
ကျန်းမာရေး နဲ့ လုပ်ငန်းခွင်
တပတ်မှာ တရက်လောက် အားကစားသင်တန်း ညနေမှာဖွင့်ပါတယ်။ aerobic class လို မျိုးပါ။ ၂လ လောက်အတွက်မှ ကို $၅၀ လောက်ပဲ ပေးရပါတယ်။ ခန်းမကျယ် တခုမှာ သင်တန်းပေးတာပါ။ တချို့ အလုပ်တွေမှာ gym equipment တွေပါ ထားပေးပါတယ်။ အစားအစာနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်
ရုံးခန်းအပေါ်မှာ ဈေးသက်သာတဲ့ canteen ရှိပါတယ်။ မနက်စာ နေ့စာ ညနေစာ ရောင်းပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီ canteen ဟာ aircon ရှိပြီး လှပတဲ့ ထိုင်ခုံ တွေ နဲ့ စိတ်အေးချမ်းသာရှိပါတယ်။ ပိုက်ဆံ နှမြောရင် မနက်စာနဲ့ ညနေစာကို အလကား ပေးသော မုန့်ဗူးထဲမှ မုန့် နဲ့ အလကားရတဲ့ ကော်ဖီ၊လဘက်ရည်၊မိုင်လို ထုတ်တွေယူပြီး ကိုယ့်အလုပ်စာပွဲမှာ စားနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်စာပွဲတိုင်းမှာ ဖုန်း အင်တာနက် ဘီရိုပု တလုံး အမှိုက်ပုံး တလုံးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ အမှိုက်ပုံးကို နေ့စဉ်သိမ်းပါတယ်။ ဘယ်သူမှ စားသောက်ထားတာတွေကို အလုပ်စာပွဲဘေးက အမှိုက်ပုံးမှာ မပစ်ပါဘူး။ pantry area က အဖုံးပါတဲ့ အမှိုက်ပုံး အကြီးမှာပဲ ပစ်ပါတယ်။ pantry area မှာ ဘေစင် ပန်ကန်ဆေး ဆပ်ပြာ ရေခဲသေတ္တာ microwave ၃လုံးလောက် ရှိပါတယ်။ HALA ထဲမှာ သွားပြီး ဘယ်သူမှ ဝက်သား မနွှေးပါဘူး။ အားလုံးဟာ ကိုယ့်ကိုကို တန်ဖိုးထားခြင်း လေးစားခြင်း နဲ့ ပဲ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ့်စည်းကမ်းကို ထိမ်းပါတယ်။ (လွှတ်ပေးထားလိုက်ရင် ဘယ်လို့ ဖြစ်မယ် ဘယ်ညာဖြစ်မယ် ဆိုပြီး ပြောဆို အုပ်ချုပ်တဲ့ အကြီး အကဲဟာ လက်အောက်ငယ်သားကို အထင်သေးတာ မလေးစားတာပါပဲ။)
ဒီချုပ်မနိုင်ရင် ဒီလူတွေ ဘာဖြစ်မလဲ? ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ သိအောင် ထပ်ပြောလိုက်မယ် ဘာမှကို မဖြစ်တာ။
ဖြစ်မှာတွေ တန်းစီ ရေးပြဦးမယ်။
– ဘာအလုပ်လုပ်ရရပါ ကျောင်းသာပြီးသွားရော လတ်ယားလတ်ယား ဖြစ်နေလို့ စလုံး ပို့ချင်တာ ဆိုတဲ့ မိဘတွေပိုပေါများလာမယ်။
-နို င်ငံခြားထွက်လုပ်ရတဲ့ အိမ်အကူတွေ ပေါများလာမယ်။ (အခု စလုံးမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာအားလုံး ရဲ့ 20% က အိမ်အကူပါတဲ့။ ဒါတောင် ပညာတတ်နေရာပေးတဲ့ နိုင်ငံမို့၊ English ရုံးသုံးနိုင်ငံမို့ 80% လောက်သော ပညာရှင်တွေ နေနိုင်တာ။ နောက်ဆို စလုံးလည်း နိုင်ငံခြားသားများလို့ အော်နေပြီ သိပ်မလွယ်တော့။)
– ဥပဒေမစိုးမိုးတော့ သူခိုးဓားပြတွေ ပေါလာမယ်။ မိရင်လည်း ထောင်ထဲ မပို့ ချင်တော့ဘူး။ လွတ်ငြိမ်း နဲ့ ပြန်လွတ်လာမှာစိုးလို့ တခါထဲ သတ်ကွာ ဆိုပြီး ဝိုင်းသတ်လိုက်တယ်။ ဥပဒေ က အားကိုးလို့ မှ မရတာလို့ ပြောကြတယ်။ ပိုဆိုးလာမယ်။
– ဝန်ထမ်းမကလို့ ဘာကြီးဖြစ်နေနေ ဥပဒေ မစိုးမိုးတော့ ဒီ နေ့ ညွှန်ချုပ် နောက်နေ့ ထောင်ထဲ ရောက်ချင် ရောက်နိုင်သေးတယ်။ ရှေ့မှာ မြင်နေရတာပဲ။
– ချမ်းသာလွန်းလို့ ပုဇွန်တုပ်ကြီး ဝယ်စားလည်း ခေါင်းထဲ ခဲ တွေထည့်ထားလို့ မြန်မြန် ရောဂါတွေရလာမယ်။
– ပြိုင်ကားဝယ်စီးနိုင်လို့တောင် လမ်းမကောင်းလို့ ညကြီး ထမောင်းပြီး သေပွဲဝင်တဲ့ သူတွေ ပေါများလာမယ်။ အများကြီး ကျန်သေးတယ်။ အကုန်ပြောလိုက်ရင် အခုချက်ချင်း သတ်သေ သွားမှာစိုးလို့။
ဒါကြောင့် အပြောင်းအလဲ လို နေပြီ။ NLD နိုင်ရင် ဘာလုပ်ပေးမှာလဲ နောက်မှ မေး။ ရှုံးရင် ဆင်းရဲ ချမ်းသာ မရွေး ရာထူးရှိရှိ မရှိရှိ အကုန် ဒုက္ခရောက်မှာ သေချာ နေပြီ။
အောက်ကလိအာ ပြောရရင် ပြည်ပမှာ နေ တဲ့ သူတွေ က အဲ့ဒီ ဒုက္ခတွေ နဲ့ အဝေးကြီး။
ဂျက်စပဲရိုး says: ကျနော်တို့ ခွင့် ၁၈ ရက် မရဘူး။
လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက် ခံ နေရပါတယ် ဆိုပြီး သွားအော် ရင် ကောင်းမလား ဟိဟိး)
ဇီဇီခင်ဇော် says: နာ က ၂၂ ရက် ရဒါ
Alinsett @ Maung Thura says: စလုံးက မဲပေးသူတွေရဲ့ ပုံရိပ်ကတော့ အခုဆို အာဆီယံတင်မက
.ပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ရတာက ဘယ်သူတွေ. . . အဲ့ဘယ်သူတွေကို မဲပေးခွင့်ရဖို့ . . .စသည်. . .
.ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေအနေနဲ့ ပြည်တွင်းမှာ ကျန်ခဲ့သူတွေကို ဘယ်လောက် ကောင်းစားစေချင်တယ်ဆိုတာလည်း ပေါ်သွားတယ်
.နောက်ပြီး သူတို့တွေလည်း ပြည်ပ တိုင်းတပါးမှာထက် ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေပေါ်မှာသာ ရှင်သန်ချင်စိတ် အဲ့ဒါလည်း သွားတွေ့တယ်။
မဲပေးလိုက်လို့ အစိုးရပြောင်း စနစ် ခေတ် ပြောင်းသွားရင် ကိုယ့်မြေကိုယ်ပြန်ပြီး ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်တိုင်းပြည်အကျိုး ကိုယ်တတ်ထားသမျှနဲ့
ပါဝင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်လည်း ရှိကြတာပဲ မဟုတ်လား။
.မေမေသာ နိုင်ရင် . . . မြန်မာပြည်ထဲ ပြန်ဝင်လာပြီး မေမေရင်ခွင်ရိပ်အောက် ပြန်ခိုလှုံမယ့်သူတွေလည်း ရှိတာပဲ
ဂျက်စပဲရိုး says: အဲ့လောက်ကြီး မတွေးမိပါဘူး ဆက်ဆက်ရယ်။
ဒီ အဘ တွေ မရှိ မှ အေးမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်လေး တစ်ခု ထဲပါ။း)
naywoon ni says: အဘ​တွေမရှိ​စေ့ချင်​တာများ အဲ့က ဂျက်​​လေယာဉ်​ တစ်​စီး​လောက်​ပို့လိုက်​စမ်းဘာ အ​မေဒစ်​ကန်​မှာ ဟို ဘာဆိုလား အဲ့​မျှော်​စင်​၀င်​တိုက်​သလို အဘ​တွေ အစည်းအ​ဝေး လုပ်​​နေတုန်း ၀င်​တိုက်​​ပေးမယ်​ ​အေး​ဆေး
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဖတ်ပြီး မြင်ယောင်ပြီး ရီလိုက်ရတာ။
NLD ကိုမထောက်ခံနိုင်ကြတဲ့ No Vote ဆရာကြီးများ
(credit to နာယကကြီး)
စင်ကာပူမှာ မဲပေးဖို့ တန်းစီနေတဲ့ မြန်မာတွေကိုကြည့်ရင်း မြန်မာပြည်မှာ
အခန့်သားထိုင်ပြီး “ဘယ်သူမှ မယုံလို့ မဲမပေးဘူးဟေ့” လို့အော်နေတဲ့
ဆရာကြီးတွေအကြောင်းစဉ်းစားမိတယ်.. စဉ်းစားလို့ ရသလောက်တော့ အဲ့လိုအော်နေတဲ့ လူတန်းစား သုံးမျိုးရှိတယ်..
ပထမလူတန်းစားက အဘမှိုင်း၊ ကုလားမှိုင်းမိနေတဲ့လူတွေနဲ့
ခွင်တည့်ထားတဲ့ မကင်းရာမကင်းကြောင်းလူတွေ.. အဲ့လူတွေဟာ
ဝါဒမှိုင်းဝနေလို့၊ မျက်နှာနာစရာရှိလို့ စတဲ အကြောင်းကြောင်းကြောင့်
NLD ကိုမဲမပေးချင်ပေမဲ့ ကြံ့ဖွတ်ကို မဲပေးရလောက်အောင်လည်း
သတ္တိကမရှိဘူး.. အရက်သမားဘယ်လောက်မူးမူး အီးတော့ မစားဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့..
အဲ့တော့လည်း “ဘယ်သူ့မှ မယုံဘူးဟေ့” ပဲအော်ရတော့တာပေါ့..
ဒုတိယလူတန်းစားကတော့ NLD ကိုအားမလိုအားမရဖြစ်နေတဲ့လူတွေ…
အဲ့လူတန်းစားထဲမှာတော့ ပညာတက်တွေ၊ စာဖတ်နာသူတွေ အများစုပါတယ်..
သူတို့ဟာ တစ်ချိန်က NLD အပေါ်မှာ မျှော်လင့်ချက်အကြီးကြီးထားခဲ့ဖူးတယ်..
ဒါပေမဲ့ သူတို့ မျှော်လင့်ထားသလောက်ဖြစ်မလာတဲ့ အခါမှာ သူတို့ဟာ အခြေအနေနဲ့အချိန်အခါကို မစဉ်းစားမိတော့ဘဲ ဂရုဏာဒေါသောနဲ့ ထပြီး “NLD ကိုမဲမထည့်ဘူးဟေ့” လို့ထအော်မိတော့တယ်.. အဲ့လူတန်းစားကတော့အားမလိုအားမရဖြစ်လို့ ထပွက်တာလောက်သာဖြစ်ပြီး အချိန်တန်ရင် NLD ကိုပဲမဲထည့်မဲ့လူတွေဖြစ်တယ်… ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ ဒီမိုကရေစီ အရေခြုံ စစ်အာဏာရှင်ကို ဖြုတ်ချဖို့ နောက်ဆုံး အခွင့်အရေးဖြစ်သွားနိုင်တယ် ဆိုတာသူတို့ ကောင်းကောင်းသိထားတယ်… ဒါကြောင့်ပဲသူတို့ဟာ
အချိန်တန်ရင် NLD ကိုမဲပေးကြလိမ့်မယ်…
တတိယလူတန်းစားကတော့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ ရွံ့စရာ အကောင်းဆုံး လူတန်းစားလို့ပြောလို့ရတယ်.. အဲ့လူတွေဟာ ဒုတိယလူတန်းစားလိုပဲ ပညာတက်တွေ၊ စာဖတ်နာသူတွေ အများစုဖြစ်တယ်…
သူတို့ဟာ ဟုတ်ယောင်ထင်ရတဲ့ စကားတွေသုံးပြီးဆွဲဆောင်လေ့ရှိတယ်.. ဥပမာအားဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒီမိုကရေစီ အာဏာရှင် ဆိုတာလိုမျိုး… ဆဲတက်တဲ့ လူတစ်စုကိုလက်ညိူးထိုးပြပြီး ဒီလိုလူတွေဝန်းရံထားလို့ NLD ကိုအယုံအကြည်မရှိဘူးဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်လေ့ရှိတယ်…
ဒါပေမဲ့ ပါးစပ်နဲ့ အာဏာရှင်ဟာ သေနတ်နဲ့ အာဏာရှင်လောက်တော့ တိုင်းပြည်ကို ဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာ သူတို့ထည့်မပြောဘူး… နောက်ပြီးပါတီတစ်ခုဟာ သူတို့ကို ပညာတက်တွေ၊ ဒီမိုကရေစီအကြောင်း “က”ကြီးကနေ “အ”အထိနားလည်သူတွေပဲထောက်ခံ.. ဆဲတက်သူတွေ၊
“က”ကြီးကိုပုတ်လောက်ရေးပြမှ နားလည်သူတွေ မထောက်ခံရဘူးလို့ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ကိစ္စကို သူတို့ထည့်မပြောဘူး… သူတို့ရဲ အဓိကနည်းနာကတော့ တစ်ဘက်က နည်းမျိုးစုံနဲ့
အကျင့်ယုတ်တာကိုထည့်မပြောဘူး.. NLD ဘက်က မခံနိုင်လို့ ပြန်ပြောရင် လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲပိုင်ခွင့်တို့…ဒီမိုကရေစီစံ..ဘာညာ စတဲ့စကားကြီးစကားကျယ်တွေသုံးပြီး ဒါမျိုးတွေကြောင့် NLD ကိုမထောက်ခံချင်တာလို့ ပြောမယ်…
သူတို့ လက်ညိုးထိုးပြနေတဲ့လူတွေဟာ အလွန်တရာ နိမ့်ကျတဲ့ ပညာရေးထဲမှာမှ ပညာရည်ချို့တဲ့ခဲ့ရသူတွေ… အာဏာရှင်ကို စိတ်ပျက်လွန်းလို့ အပြောင်းအလဲလုပ်ချင်ဇောကြီးနေသူတွေဆိုတာတော့ ထည့်မပြောကြဘူး..
သူတို့ရဲ့ သဘောက ဘာနဲ့ တူလဲဆိုတော့ မန်ယူဖန်တွေ ကြည့်မရလို့ မန်ယူကို အားမပေးဘူးဆိုတာ လိုမျိုးပဲ..
အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်နေတဲ့ တတိယလူတန်းစားကိုကြည့်ကြည့်ရင် နှစ်မျိုးတွေရတယ်..
တချို့က အပျော့စားလော်ဘီတွေ… သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က လူတွေမဲမပေးဖြစ်ဖို့ပဲ.. များသောအားဖြင့် တပည့်တပန်းပေါ၊ အဆက်အသွယ်ပေါတဲ့
လုပ်ငန်းရှင်တွေလုပ်ကြတယ်(အဲ့အတွက်ရတဲ့အကျိုးအမြတ်ကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲသိလိမ့်မယ်)…. အဲ့ဒါမျိုးကို အရည်မရ အဖတ်မရနဲ့ လုပ်တာကတော့ (ဖြူဖြူ့စကားနဲ့ပြောရရင်) အမြုံစိတ်ရှိတဲ့လူတွေပဲ…သူတို့ဟာစာတွေဖတ်ထားတယ်.. သူများထက်ပိုတဲ့ ဗဟုသုတတွေရှိထားတယ်.. ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့ မဟာအတွေးအခေါ်ကြီးတွေဟာ လူအသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရဘူး… အဲ့တော့ သူတို့ဟာ အချဉ်မဟုတ်ဘူး..
သူများယောင်တိုင်းလိုက်မယောင်ဘူး.. လူတိုင်းထောက်ခံနေတဲ့ ပါတီကြီးတစ်ခုရဲ့ ညံ့ကွက်တွေကိုဖော်နိုင်လောက်အောင် တွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်စွမ်း၊ ဝေဖန်ပိုင်းခြားစွမ်းနိုင်မြင့်မားတယ်ဆိုတာအများပြည်သူသိစိမ့်သောငှာ ရည်စူးပြီး သာဒွေးမျောက်လို လူထူတာနဲ့ ×ီးထဖြဲပြတော့တာပဲ..့ ပြောချင်တာက ပထမလူတန်းစာကတော့ မီးပုံးပျံလို မှိုင်းဝနေတုန်းတော့ ပျံနေဦးမှာပဲ..ဒုတိယလူတန်းစားကတော့ ဘာပြောပြော အချိန်တန်ရင်သူ့ဟာသူ လုပ်စရာရှိတာ လုပ်သွားလိမ့်မယ်..တတိယလူတန်းစားကတော့ကိုယ့်အကျိုးအတွက်.. လူအထင်ကြီးခံချင်တာအတွက်နဲ့မတရားမှုကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေမဲ့လူတွေ.. တခြားလူတွေကိုလည်း မတရားမှုကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေတက်အောင်
အကယ်လို့ ခင်ဗျားမှာလုံလောက်တဲ့ အတွေ့အကြုံမရှိရင် သူတို့က ခင်ဗျားကို ဟုတ်ယောင်ယောင်တွေနဲ့ လမ်းမှားကိုဆွဲခေါ်သွားကြလိမ့်မယ်..
Shwe Ei says: -တတိယလူတန်းစားတွေ…ကို့အနီးအနားတင်ရှိနေတာ…စိတ်ပျက်မိတယ် ..
-ပြန်ပြောဖို့ကလဲ..အချေအတင် ငြင်းရဖို့လောက်ထိ ပတ်သတ်လို့မဖြစ်တဲ့ အခြေအနေ..
-မသိချင်ယောင်ဆောင်ပီး..ရှောင်ထွက်သွားရုံကလွဲလို့.. ဘာမှမတတ်နိုင် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 527
ဂျက်စပဲရိုး says: ကုသိုလ်ကံကောင်းချင်တော့ သိကျွမ်းသမျှ ထဲ မှာ ဖွတ် ပရိတ်သတ် မရှိသလောက် ရှားတယ်။
(တစ်ယောက် လားပဲ တွေ့မိတယ် ဖွတ်အားပေး ပို့စ်တွေ ရှဲနေတာ)
ဖဘ မှာတော့ ဒေါင်း ပရိတ်သတ်တွေ များလွန်းလို့ တစ်ခုခု ဆို ဟိုလူရှဲ ဒီလူ ရှဲ နဲ့ အကြောင်း အရာ တစ်ခု ဆို မုန်းလောက်အောင် မြင်နေရတာ။း)
အမေ တို့တောင် မှ မဲပေးစရာ က NLD တစ်ခုထဲ လောက်လောက် လားလား ရှိတာ အဲ့ဒါပဲ ပေးရတော့မပေါ့ ဖြစ်သွားပြီ။း)
မြစပဲရိုး says: ဒါလဲ ကိုဌေးနိုင် ဆီ က မ လာတာ။ :-))
ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းမှာ swing voters တွေရှိပါတယ်။ နှစ်ဘက်စလုံးမှ သဘောထားပျော့ပြောင်းသူများကို ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ သာကူး၊ ခြံစည်းရိုးခွထိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကတော့ နိုင်ငံရေးမှာမယဉ်ကျေးပါဘူး။ အခြေကျပြီးသားဒီမိုကရေစီကြီးတွေမှာ swing vote ဟာအရေးပါတဲ့အတွက် ကိုယ့်ဘက်ပါအောင်ဆွဲကြရတယ်။ မဲဆွယ်တဲ့နည်းကတော့ ကိုယ့်ပါတီဟာ အစွန်းတစ်ဖက်ကို မသွားပါဘူးဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးပြခြင်းပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း အယူအဆကြောင့်ထက် အခြေအနေအရ ပြတ်ပြတ်သားသားမဖြစ်နိင်ကြတဲ့ တပ်မတော်သားတွေ၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေ၊ ဘာသာရေးမှိုင်းမိနေသူတွေ စသဖြင့် swing voter အများအပြားရှိကြမှာပါ။ သိမ်မွေ့တဲ့နည်းနာကတော့ ကိုယ်လူဖြစ်ပြီးသား ကိုယ့်ရဲ့ power base ကို boost လုပ်ရင်း swing voter တွေကိုတစ်ပါတည်းဆွဲဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်တိုင်ရာရောက် ပစ္စည်းတွေ ပေးပြီး ကို အဖျားယောင်းခံရတော့ အားနာ နေကြတဲ့အပြင်
အမျိုး ဘာသာ သာသနာ နဲ့ မှိုင်းမိနေတဲ့ နယ်ဘက် က ချစ်သော အဒေါ်များ ကို တအိအိ နဲ့ ဆွဲနေရတာ ပါတော့လာပြီ။
ကိုယ့် လေအား အပြင် သူတို့ က လင်းလင်း ကို လဲကြိုက်ကြတာမို့ လဲ ပါမယ်။ lol:-))
သူတို့ဆို swing voters တွေ ဘဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.